Babhikishe bavala imigwaqo befuna izindlu | IOL Isolezwe
Babhikishe bavala imigwaqo befuna izindlu
Isolezwe / 3 July 2012, 11:52am /
Umphakathi wase Welberdacht obubhikisha ushisa amathayi emqwaqeni.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Umphakathi wase Welberdacht obubhikisha ushisa amathayi emqwaqeni ugadwe ngamaphoyisa.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
KUQALE phansi ukubhikishelwa kwezindlu zomxhaso eThekwini njengoba izolo eWelbedacht kube nokhukhulelangoqo wombhikisho kushiswa amathayi emgwaqweni abantu bekhala ngokuswelakala kwezindlu zomxhaso nokudilizelwa imijondolo eSiyathuthuka naseProgress.
Amalungu omphakathi Isolezwe elikhulume nawo athe sekuyiminyaka eminingi behlala kule ndawo ngaphansi kwesimo esingagculisi kanti nezindlu ezakhiwa kule minyaka eyedlule awukaze uzuze kuzo kodwa zitholwa ngabantu abangaziwa ukuthi baqhamuka kuphi.
UMnuz Abdul Salamaan, owafika kule ndawo ngo-1994, uthe kunzima ukuphila kubo ngoba ababhekele ezezindlu kuMasipala weTheku bakhombisa ukungaphuthumi nokungabakhathaleli abantu bakule ndawo.
Uthe ngoMsombuluko wesonto eledlule kufike abantu abebehamba ngezimoto zakwamasipala abebediliza imijondolo yabantu bebatshela ukuthi abanalo ilungelo lokuhlala kule ndawo ngoba bakhe ngokungemthetho.
“Sikhathazeke kakhulu ngoba asikaze sinikezwe isikhathi esanele sokuba silungiselele ukukhishwa kule ndawo. Okunye wukuthi uma sixoshwa lapha kumele sifunelwe enye indawo esizohlala kuyo ukuze singabi ngondingasithebeni. Akukho emthethweni ukuthi uMasipala ukhiphe abantu lapho behlala khona ngaphandle kokubafunela enye indawo,” kukhala uSalamaan.
Zibalelwa ku-14 izindlu ezishaywe phansi selokhu kuqale ukudiliza.
UMnuz Renesh Sathis, oseneminyaka engu-14 ehlala kule ndawo, uthe inhliziyo yakhe iyaqaqamba ngoba usebenzise imali ecela ku-R15 000 akha indawo ephephile azohlala kuyo nomkakhe nendodana eneminyaka emibili.
“Bafike badiliza indlu yami, bawohloza ukhonkolo phansi, bephula uthayela yonke into yami engiyisebenzele kanzima yaphenduka yaba yincithakalo. Ngizizwa ngenzelwe phansi ngoba angisafuni mxhaso kuhulumeni njengoba yonke le minyaka ngehlulekile ukuwuthola. Ngifuna indawo engingazakhela kuyo umuzi, yilokho engikufunayo, ngizoqala phansi,” kusho u-Sathis.
Ulaka kubantu balapha lubhalwe ebusweni futhi nenhlupheko uyibona uhamba nje. Izigxobo zikagesi emgwaqweni zilenga izintambo zikagesi oxhunywe ngokungemthetho obizwa “ngelezinyokanyoka”.
Amanzi ahlanzekile abantu balapha kabanawo, bathe nawo bayaweba ngoba bamba phansi baxhume amapayipi ngokungemthetho ukuze baphile. Sekuyinsakavukela ukuthi abantu balapha babhikishe kwazise nasekuqaleni konyaka babhikisha bekhala ngokuthi kabanakiwe bethi nekhansela labo alibanaki.
UNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana noMphakathi, uMnuz Willies Mchunu, ethatha uhlu lwezikhalo, wethembisa ukuthi izikhalo zabo uzozedlulisela phambili kuMasipala.
Ikhansela ku-ward 72, uMnuz Mthembeni Shezi, alitholakalanga kumakhalekhukhwini kanti nalapho bekubhikiswa khona belingekho.